MCRB calls for Further Consideration of the Impacts of Requiring SIM Card Registration in Myanmar - သတင်းမီဒီယာစင်တာ
ဆန္ဒအလျောက်လေးစားလိုက်နာနိုင်သော လုံခြုံရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ
You are here Home » သတင်းမီဒီယာစင်တာ » MCRB calls for Further Consideration of the Impacts of Requiring SIM Card Registration in Myanmar
MCRB calls for Further Consideration of the Impacts of Requiring SIM Card Registration in Myanmar
မေ 21, 2014
The Ministry of Communications and Information Technology of the Republic of the Union of Myanmar (MCIT) is conducting Public Consultation on the Code of Practice for Mobile Customer Registration.
MCRB has responded to the Myanmar government’s public consultation onaCode of Practice for Mobile Customer Registration. The Centre welcomes the transparent consultation process.
However, in view of the potential negative impacts of SIM Card registration it encourages the government to study the human rights impacts further before takingadecision on mandatory SIM Card registration.
MCIT–PTD Public Consultation - Submission by MCRB
Document PDF, 715.04 KB, 775 downloads, မေ 21, 2014
MCRB Provided Comments on Draft E-commerce Strategy for Myanmar and Draft eCommerce Guidelines 2020
Recorded discussion panel: "In Privacy and Data Protection We Trust!"
အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများအပေါ် ကန့်သတ်မှုများကို ရုတ်သိမ်းရေး
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာနက ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးမူကြမ်းဆိုင်ရာ ပဏာမအကြံပြုချက်များအား အစိုးရသို့ ပေးပို့ကာ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်များအပေါ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
They Are Helping Generals to Become Millionaires - People Are Angry at That
Web presenceakey indicator of corporate transparency
ဖေဖော်ဝါရီ 19, 2021
ဖေဖော်ဝါရီ 12, 2021
ယခုအပတျတှငျ အခြို့သော ဝနျကွီးဌာနမြားသညျ ‘ဆိုကျဘာလုံခွုံရေးဥပဒေ’ မူကွမျး အား (အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့ ဆကျရနျရှိ) ဖဖေျောဝါရီ ၁၅ ရကျတှငျ အဆောတလငျြသဘောထားမှတျခကျြ ပေးပို့ရနျ မွနျမာနိုငျငံရှိ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားသို့ (အိုငျစီတီ၊ ဘဏျမြား) သို့ပေးပို့ခဲ့သညျ။
ဇန်နဝါရီ 28, 2021
ရနျပုံငှမြေားကို ယူကအေစိုးရ ( အပွညျပွညျဆိုငျရာ ဖှံ့ဖွိုးရေး တိုးတကျရေး ဌာန)၊ နျောဝေ၊ ဆှဈဇာလနျ၊ နယျသာလနျ၊ အိုငျယာလနျ နှငျ့ ဒိနျးမတျနိုငျငံတို့ မှရရှိပါသညျ။